Justin Timberlake akashoropodza kusakumbira ruregerero kuna Kylie Minogue, sechiitiko cheBrit Awards chinoenda muhutachiona - Pop-Tsika
Justin Timberlake akashoropodza kusakumbira ruregerero kuna Kylie Minogue, sechiitiko cheBrit Awards chinoenda muhutachiona
Kukadzi 1, 2004, Justin Timberlake akashamisa nyika paakabvarura mbatya dzaanoshanda pamwe naJanet Jackson paSupp Bowl XXXVIII halftime show ndokumufumura pasi rose.
Makore gumi nemasere gare gare, mutambi uye muimbi akaburitsa kukumbira ruregerero uko kwaakatora kuzvidavirira kwezvaakaita kuna Jackson uye aimbove musikana wake Britney Spears.
Chinyorwa chakagovaniswa naJustin Timberlake (@justintimberlake)
Mune yakadzama Instagram posvo, ane makore makumi mana akaburitsa pachena kuti akabvuma zvese zvakataurwa, mateki uye kunetsekana izvo zvakamudaidza mushure mezvakangoitika zve'Framing Britney 'zvinyorwa.
Achikumbira ruregerero nezvehunhu hwake kuna Spears naJackson, Timberlake akati,
'Ndine urombo kwazvo nezvenguva muhupenyu hwangu apo zviito zvangu zvakakonzera dambudziko, kwandakataura zvechimbi chimbi, kana kusataura zvakanaka. Ini ndinonyatsoda kukumbira ruregerero kuna Britney Spears naJanet Jackson vese vari vaviri, nekuti ndinotarisira nekuremekedza vakadzi ava uye ndinoziva kuti ndakundikana '
Kukumbira ruregerero kunodzokera kumashure angangoita makore makumi maviri mumatambudziko ese aya, nehukama hwake hune chepfu na Spears achifumurwa mune yake ichangoburwa-yepamusoro zvinyorwa.
inotanga nguvai humambo 2017
Nekudaro, Timberlake inoita kunge yakanganwa nezve Kylie Minogue.
FUNGA KUTI NDANI AKAMIRISWA PATSVA: Vhidhiyo yaJustin Timberlake achibvunza Kylie Minogue kana achigona kumubata dhongi zvakare kumutsazve, achisiya vazhinji vakatsamwa. Izvi saJustin akangokumbira ruregerero kuna Britney Spears naJanet Jackson nenzira yaakavabata nayo. pic.twitter.com/DZcdaeJbKf
- Def Noodles (@defnoodles) Kukadzi 12, 2021
Pa2003 Brit Awards, iye 'Ndidanidzire Rwizi' hitmaker akakakavadzana mushure mekutsvanzvadzira zvisina kukodzera Minogue, kunyangwe akamuudza kuti arege.
Chikamu chiri pamusoro chinobva kumaGrammy, uko Timberlake akabvunza nekuseka Minogue kana aigona 'kumubata **' zvakare.
Vashandisi veTwitter vakatanga kukumbira ruregerero kubva kuna Timberlake uye ndokutanga kumudaidza online.
Anopokana Justin Timberlake, Brit Awards chiitiko, chakatsanangurwa saKylie Minogue anowana rutsigiro online.
Mukumira kwekupomerwa kunokatyamadza kwakabuda muBritney Spears zvakanyanya kutaurwa nezve 'Kuturika Britney' zvinyorwa, Justin Timberlake aona manzwiro eruzhinji kwaari kwaari achinyunyuta zvakanyanya pamucheto wekukanzura.
Vazhinji vanotenda kuti dai zvisiri zvehukuru hwekutsamwa online, muimbi wemakore makumi mana angadai akaramba akanyarara, sezvaakasarudza kuita makore ese aya. Kukumbira ruregerero kwake, kwainzi kwakadarika nguva refu, kwakashoropodzwa ipapo neazhinji internet.
Vanoverengeka vakaratidzawo hunhu hwake husina kukodzera pa2003 Brit Awards, ine tweet kubva ku2018 ichienda kuhutachiona.
Saka Kylie Minogue akaudza Justin Timberlake kuti HAAZOGONA kubata mbongoro yake kuBrit Awards muna 2003 asi zvakadaro akafunga kuzviita zvakadaro, kwete izvozvo chete asi aive benzi zvekuzvirova dundundu pamusoro paro zuva rinotevera. Ichi ndicho chikonzero akange asina kodzero yekupfeka Times Up bheji kuGolden Globes pic.twitter.com/j4omIyIaE1
- Lewis (@ ConfideInTay13) Kukadzi 4, 2018
Sezvakataurwa neMirror, Timberlake akataura kuti akataura kuti 'aimirira America' uye kuti 'zvainakidza kwazvo.'
Nezviito zvake zvisina mubvunzo uye matauriro aibuda pamhepo 21-makore-gare gare, nharaunda yepamhepo yakave yakajeka sezvo ivo vaida kukumbira ruregerero kuna Minogue futi.
Izvi zvaive chaizvo mushure mekunge abata dhongi rake panguva yekupihwa mubairo (Brit Awards ini ndinofunga) - ZVAAakabvunza pamberi pekuita kana aigona kubata dhongi rake sechikamu chechiito uye akati kwete. Asi zvakadaro akazviita zvakadaro nekuti inguruve
- Dalton Owens (@daltonowens_) Kukadzi 12, 2021
wtf vakadaidzira Britney kuti ave munhu akaipa wekuteedzera uye hapana mumwe mu media akataura peep nezve izvi paanenge achirova bonde Kylie Minogue, zvinotyisa kuti misogynistic indasitiri yemimhanzi inogona sei pic.twitter.com/mRRBlDUl1t
- ℓєση (@mewxcx) Kukadzi 12, 2021
Zvino Justin Timberlake anogona kuvhura manotsi ake app kukumbira ruregerero kuna Kylie Minogue futi? pic.twitter.com/js4RmFPprR
- Mimie Mathy # 1 stan ミ ☆ (@careyspearss) Kukadzi 12, 2021
Justin Timberlake anofanirwa kukumbira ruregerero kuna Kylie Minogue nekumurovawo pabonde.
- jorodhani (@velvetnikes) Kukadzi 12, 2021
Soooo ini zvakare ndakanzwa kuti she wasnt suppose to take Kylie at the Brit awards Performance and he did as well ndokuzozvirova dundundu nezvazvo mubvunzurudzo. Anofanira kukumbira ruregerero kwaari zvakare @jtimberlake @kylieminogue https://t.co/PBM1fsWd66
- Jermaine Phoenix (@ CJ_I_AM_PNX81) Kukadzi 12, 2021
Ndiri kuraramira kuzivikanwa pamwe chete kwaJustin Timberlake maitiro ekushandisa vakadzi kuti awane pfuma yake. Britney, Janet, uye usakanganwe paakatsvangadzira Kylie kuBrits.
Handingashamiswe kuona kuti anga akavandira kumashure kweiyo Blurred Lines vhidhiyo.
- Dr Philippa Burt (@BurtieStubbs) Kukadzi 12, 2021
Kylie anotaridzika kusagadzikana. Ndine shungu pamoyo. Ndinokuvenga zvakanyanya @jtimberlake
- matt (@ G4LMATT) Kukadzi 13, 2021
Ko zvakadii naKylie Minogue, achibata bata rake apo iye akange akumbira kuti usadaro, ipapo uchizvikudza pasi rese? Une hurombo nazvo Justin zvakare? @jtimberlake https://t.co/iaP7FxkOdW
- Ntando Thabethe (@_NtandoThabethe) Kukadzi 12, 2021
Tinogona here kudzima Justin Timberlake izvozvi?
- Pop Underrated (@pop_underrated) Kukadzi 10, 2021
Britney Spears, Janet Jackson, & ikozvino zvakare Kylie Minogue.
Ini ndakamirira chaizvo kuti ndione kuti haana kuremekedza sei kana kuti Madonna akasvibisa sei panguva yake ye'Hard Candy 'nekuti izvozvi ndizvo zvitatu zvevandinoda vevakadzi vevapopayi vekuti Justin Timberlake akatadzira.
Ndeipi mbichana. https://t.co/ssDjUJ330R
- Sisenjeni ‍♂️ (@MvelaseP) Kukadzi 11, 2021
@jtimberlake uchazokumbira ruregerero riini kuna Kylie Minogue nekubata dhongi rake mushure mekunge ati kwete, ndokuzoenderera mberi achizvikudza nezvazvo mabvunzurudzo? PREDATOR! MISOGYNISTIC BONDE MURUME! JAIL! https://t.co/m4d3H55jBC
- matt (@ G4LMATT) Kukadzi 12, 2021
#KylieMinogue is Royalty, mumwe muenzaniso we #JustinTimberlake kuva marara https://t.co/IKvDnADg13
- RossJL (@ RossJL5) Kukadzi 12, 2021
Hei @jtimberlake ikozvino ita @kylieminogue
Izvi zvaive zvakakomba. Tichamirira https://t.co/tzSFdmwEGQ
- MaryO (@cajuninfused) Kukadzi 12, 2021
Nekupokana kusvika padanho rinopisa online, zvinoita sekunge nguva yakapfuura yaTimberlake yakamubata. Kukumbira ruregerero kwake kunoramba kuchisiya internet yakakamurwa.
Zvakare, pamwe nekukanzura tsika mhomho inopisa pazvitsitsinho zvayo, zvinoramba zvichionekwa kana achizopa mutoro wezviito kuna Kylie Minogue uye osarudza kupa kumwe kukumbira ruregerero.
randy orton iri kudzoka rini kuWwe
aj masitaera mashanu nyeredzi machisi
akaroora uye achidanana nemumwe munhu
wwe mambo wemhete bracket 2019